Barnaamijkeena WIC wuxuu ka wareegayaa jeegaga una gudbaayaa Kaarka Faa'iidada Wareejinta Elektiroonigga ah (EBT) ee aan ugu yeerno "eWIC." Kaarka eWIC cusub wuxuu u eg yahay kaarka deynta wuxuuna leeyahay dhammaan dheefahaaga WIC ee hal meel ah.
Waa dhakhso - Waqtibaa kaydiyaa goob-hubinta!
Waa Dabacsanaan - Iibso wax yar ama wax badan oo ka mid ah cuntadaada WIC markiiba!
Waa Sahal - Jeegag warqado oo dheeri ah ma jiraan!
Dib u soo kabashada eWIC waxay dhameystiri doontaa gobolka oo dhan dhamaadka bisha Agoosto, 2019. Markaa hadaadan wali helin kaarkaaga, goor dhaw waad imaan doontaa!
Adeegso astaamaha "Faa'iidooyinkayga" ee WICShopper.
U adeegso muuqaalka “Bakhaarada WIC” ee WICShopper ama wac xarunta caafimaad ee WIC ee deegaankaaga si aad wax uga weydiiso dukaamada WIC ee aagga ku yaal.
Isticmaal "Tani ma iibsan karto!Muuqaalka WICShopper si loogu gudbiyo UPC iyo macluumaadka wax soo saarka WIC!
FAA'IIDADA UGU FUDUD AH - Kani waa shey u qalma WIC, si kastaba ha noqotee MA AHAN faa iidooyinka aad ku iibsan karto. Ama aan lagu siinin faa iidooyinka shaygan, ama aadan heysan faa iidooyin kugu filan oo aad ku iibsato.
Lama ogaan karo - Tani macnaheedu waa sheygu kuma jirin liiska cuntada laakiin ma aanan awoodin inaan ku xirno WICShopper martida si aan u aragno haddii lagu daray maalmihii ugu dambeeyay. Inta badan, tani ma aha shey u qalma WIC.
A: Xaaladaha badan, WICShopper ma baari karto miraha iyo khudaarta darayga ah marmarka qaarkood dukaamada waxay adeegsadaan baakado ay ku jiraan liiska badeecadaha la oggolaaday. Si kastaba ha noqotee, dhan oo dhan, pre-cut, jeexan ama cabbir qaadasho shaqsiyeed oo aan lahayn soosas ama dhuuqmo ayaa loo oggol yahay Waxaa jira xeerar kale, sidaa darteed tixraac liiska cuntadaada ee barnaamijka si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.